Okumele kuqashelwe of isiguquli samandla omoya Air Amafutha Isihlukanisi - Airpull (Shanghai) Hlunga Co., Ltd
1. Thatha ezicindezelwe Air Quality ku-akhawunti Ezimweni ezivamile, emoyeni onomfutho ekhiqizwa kusukela compressor emoyeni iqukethe kwamahala kwenani elithile lamanzi namafutha lubricating, womabili awavunyelwe ngezikhathi ezithile. Kulesi simo, asigcini nje udinga ukukhetha efanele emoyeni compressor, kodwa futhi kufanele wengeze eminye imisakazo ukwelashwa okuthunyelwe.
2. Khetha compressor non-nivame ezingasetshenziswa ukukhiqiza umoya onomfutho kuphela khulula uwoyela. Lapho wanezela nge purifier samabanga aphansi noma noma dryer, le compressor emoyeni ungenza emoyeni onomfutho kungekho okuqukethwe uwoyela noma amanzi.
3. I degree of omiswe bese ekwandeni buyahluka kuye ngezinkathi imfuneko iklayenti. Ngokuvamile, i-oda kulungiselela: emoyeni compressor + emoyeni isitoreji ithangi + FC centrifugal isihlukanisi uwoyela-amanzi + esiqandisini emoyeni dryer + FT isihlungi + FA micro uwoyela inkungu isihlungi + (Absorption uya woma + FT + FH ocushiwe carbon zokuhlunga.)
4. ithangi isitoreji emoyeni kungokwalabo isitsha ingcindezi. Kumele ifakwe ukuphepha valve, ingcindezi gage, nezinye izesekeli ukuphepha. Lapho inani emoyeni osenyameni ivela 2m³ / amaminithi 4m³ / imiz, sebenzisa 1,000L isitoreji emoyeni ethangini. Ngenani ezisukela 6m³ / imiz to10m³ / imiz, ukhethe ithangi ivolumu 1,500L ukuze 2,000L.